दसैंमा विदेशबाट फर्कँदा केके ल्याउन पाइन्छ? कति लाग्छ भन्सार? -
दसैंमा विदेशबाट फर्कँदा केके ल्याउन पाइन्छ? कति लाग्छ भन्सार?
September 25, 2019 September 25, 2019 Purakhabar News
काठमाडौं- तपाईं वैदेशिक रोजगारीबाट दशैँमा घर फर्कँदा आफूलाई आवश्यक र मन परेका सामग्री लिएर फर्कँदै हुनुहुन्छ? यदि हो भने त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुनकुन सामग्री बिना भन्सार ल्याउन पाइन्छ भनेर बुझ्दा सजिलो पर्छ। यसका साथै कुन सामानमा ल्याउन कति भन्सार लाग्छ भन्ने पनि बुझ्नुभयो भने अझ सहज हुन्छ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निजी गुन्टा, झिटी, भारीसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिले उल्लिखित सबै वा कुनै मालसामान ल्याउँदा भन्सार महसुल पूर्ण छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि विकास बैंक ह्याकिङ प्रकरण : बैंककै कर्मचारीको संलग्नता !
अमेरिका, बेलायत, जापानबाट नेपालमा ‘ट्रेडमार्क चोरी’ विरूद्ध उजुरी
उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क चोरी विरूद्ध ४६ वटा उजुरी परेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को दुई...
सरकारले घटायो व्यवसायीले घटाएनन् ग्यासकाे मूल्य
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घटाए पनि व्यापारीले भने पुरानै मूल्यमा...
८ असोज, काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय सिस्टम हृयाकिङको विषय चर्चामा छ । चिनियाँ हृयाकरहरुले...